Hello Nepal News » युभेन्टसलाई १६औं स्थानको बेनेभेन्टोले डुबायो : युभेन्टसद्वारा उपाधिलाई बाई–बाई !
युभेन्टसलाई १६औं स्थानको बेनेभेन्टोले डुबायो : युभेन्टसद्वारा उपाधिलाई बाई–बाई !
इटालियन सिरी ए लिगको उपाधि होडमा फर्किन ठूलै संघर्ष गरिरहेको युभेन्टसको उपाधि यात्रा अब करिब–करिब सकिएको छ । आज आइतबार राति भएको लिगको २७औं साताको खेलमा युभेन्टस आफ्नै घरेलु मैदानमा लिगको १६औं स्थानको बेनेभेन्टोसँग ०–१ ले पराजित भएपछि उसको उपाधि यात्रा व्यवहारिक रूपमा अब एकदमै कठिन बनेको छ । बेनेभेन्टो यसै सिजन मात्रै शीर्ष लिगमा बढुवा भएको टोली हो, जसले आज युभेन्टसलाई ठूलै चोट दियो । लिगको पुछारतिरको टोलीसँग घरमै अप्रत्यासित हार भोगेपछि युभेन्टसको यो सिजनको उपाधि होड करिब–करिब सकिने बिन्दुमा पुग्यो भन्दा फरक नपर्ला ।
आफ्नो घरेलु मैदानमा युभेन्टसले खेलभरि नै लगातार आक्रमण बुने पनि पाहुना टोली बेनेभेन्टोले उत्कृष्ट रक्षात्मक खेल खेल्दा घरेलु टोली स्तब्ध बनेको हो । युभेन्टसका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेको १ गोल रद्द हुनु र एक खराब फउलमा युभेन्टसले पाउने सम्भावित पेनाल्टीमा रेफ्रीले बेवास्ता गर्दा युभेन्टसले अप्रत्यासित हार भोग्नु परेको हो । युभेन्टसले यस्तो टिमसँग हार भोग्यो कि, जसले लिगमा पछिल्ला १२ खेलमा कुनै खेल पनि जितेको थिएन । उसले लिगमा १२ खेलमा जितविहीन यात्रापछि साबिक च्याम्पियनलाई उसकै घरमा सनसनीपूर्ण ढंगले हरायो ।
त्यत्ति मात्रै हैन, बेनेभेन्टोेले पहिलोपटक सिरी ए लिगमा युभेन्टसलाई उसकै घरमा हराएर कीर्तिमान पनि बनाएको छ । ऊ अब एक मात्रै यस्तो टिम बनेको छ, जसले शीर्ष लिगमा बढुवा भएकै सिजन साबिक च्याम्पियनलाई उसकै घरमा हराउन सफल भएको छ । यो खेल जित्दा बेनेभेन्टोले ३ अंक मात्रै जितेन, युभेन्टसको उपाधि होडमा फर्किने झिनो सम्भावनामा पनि पानी पोखिदियो । सम्भवतः युभेन्टस अब फेरि लिगको उपाधि होडमा फर्किन सक्नेछैन । किनभने, ऊ अब समान खेलपछि लिग लिडर इन्टर मिलानभन्दा ठीक १० अंकले पछि परिसकेको छ । लिगमा अब मात्रै ११ खेल बाँकी रहेका बेला यो फराकिलो अन्तर हो ।
एलिनाज रंगशालामा युभेन्टस आफ्नै गल्तीले गोल खाएर पराजित भएको हो । ब्राजिलियन मिडफिल्डर अर्थुर मेलोले गल्ती गर्दा बेनेभेन्टोले त्यसको फाइदा उठाएर गोल हानेको थियो । ६९औं मिनेटमा मेलोले बक्सको तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्लो भागमा रहेका ड्यानिलोलाई बल पास गरेकोमा सो बल ड्यानिलोसम्म पुग्न नपाई बीचैबाट बेनेभेन्टोका अडोल्फ गाइजले बल नियन्त्रणमा लिएर हानेको सटले युभेन्टसका गोलकिपरको साइडबाट जाली चुमेपछि घरेलु टोली संकटमा परेको थियो । युभेन्टसले गोल खानुमा अर्थुरको फितलो पास नै मुख्य कारण बन्यो ।
आफ्नै मैदानमा गोल खाएपछि युभेन्टसले लगातार आक्रामक खेले पनि गोल गर्न सकेन । र, ०–१ ले पराजित भयो । युभेन्टसले खेलभरिमा कूल २१ सट हान्दै ७ सट अन टार्गेट हानेको थियो । उसले ७४ प्रतिशत बल आफ्नो पक्षमा राखे पनि १ गोल पनि गर्न नसक्दा उसको हार टरेन । पाहुना टोली बेनेभेन्टोले जम्मा २६ पतिशत बल पाउँदा ७ पटक प्रहार गर्दै मात्रै १ सट हान्यो । र, उसले त्यही १ सटमा गोल पनि गरेर ऐतिहासिक जित निकाल्न सफल भयो ।
अब यो हारपछि युभेन्टसको खातामा २७ खेलपछि मात्रै ५५ अंक भएको छ । ऊ तेस्रो स्थानमा यथावत छ । एक खेल बढी खेलेको एटलान्टाले युभेन्टसकै जति ५५ अंक बनाएर चौथो स्थानमा छ । समान २७–२७ खेलपछि युभेन्टस अब लिग लिडर इन्टर मिलानभन्दा ठीक १० अंकले पछि छ । लिगमा मात्रै ११ खेल बाँकी रहेको अवस्थामा युभेन्टसका लागि अब उपाधि होडमा फर्किन एकदमै कठिन भएको छ । सम्भवतः आजको हार उसका लागि उपाधि होडमा आत्मासमर्पण नै साबित हुनेछ । यता, युभेन्टसलाई हराउने बेनेभेन्टो भने २९ अंक बनाएर १६औं स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति ८ चैत्र २०७७, आईतवार १४:४०